Home - Largest Somali News Site - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho - Page 2873
Faysal Ali Axmed (Alteeso) - November 21, 2018
Xisbiga TPLF oo hogaamin jiray taxaafulka EPRDF oo dalka Ethiopia soo maamulayey muddo labaatan sano ka badan ayaa eed kulul u jeediyey xukuumadda cusub ee hormoodka ka yahay RWe Abiy Ahmed. Ugu yaraan, 79 isugu jira saraakiil dhinaca amniga ah iyo ganacsato oo badidoodu qowmiyadda Tigreyga ah ayaa toddobaadkii hore...
Ururka Al Shabaab oo weerar ka geeystay gudaha Dalka Kenya
Shan qof ayaa ku dhaawacantay dalka Kenya nin u dhashay dalka Talyaaniga waa la Afduubtay ka dib markii dagaallyahano lagu tuhunsan yahay Shabaab ay weerar ku qaadeen goob looga dukaameysto. Weerarka ayaa ka dhacay xarunta dukaamada ee Chakama oo ku taalla degaanka Kilifi hoos yimaada Magaalada Mombaza ee dalka Kenya. Rag...
sida aan wararka ku heleyno degaanka Maamiye oo u dhaxeeya Camaara iyo Caad ee degmada Xarardheere gobolka Mudug ayaa sheegaya in Markale xalay diyaarad dagaal ay halkaasi duqeyn geysatay. Qaar ka mid ah dadka degaanka ayaa xaqiijiyay in markale diyaarad dagaal ay dhowr Madfac ay ku dhufatay saldhig ay leeyihiin...
1...2,8722,8732,874...2,922Page 2,873 of 2,922